Habka ugu wanaagsan ee raaxada dumarka. ee aad ka u dhanaan - iftineducation.com
Habka ugu wanaagsan ee raaxada dumarka. ee aad ka u dhanaan
iftineducation.com – Dareenka naasaha haweenka,
Raaxada dadka way ku kala duwan yihiin rag iyo dumarba marka aan ka hadalno dareenka naaska dumarka waa noocyo badan naago waxaa jira marka naaska laga taabto aad raaxo u dareema jirkooda oo dhan jiriiirico ka soo yaacda xaadadooda istaagta markaas kacsigooda wuxuu gaarayaa heer sare xataa waxaa laga yaabaa gabadha xiligan siilkeeda inuu soo buurto oo soo bararo kacsi dartii.
Faruurihiisa oo dhan soo kululaadaan, haddii naagta noocan ah loo dhuuqo naasaha aad bay u raaxaysanaysaa waxaa laga yaabaa inay sidaas ku biyabbaxdo, nooc kale ayaa jira dareenkooda naaska aad ma sii aha laakin marka lagu samaynayo shaqada galmada oo ay biyabbixi rabto waxay rabtaa naaskeeda in xoog loo majuujiyo ama la jaqo.
Aad bay ugu macaansanaysaa, waayo naasaha iyo cambarka xiriir ayaa ka dhexeeya, ma isbaddalaa naagta marka ay kacsato naskeeda? haa waa isbaddalaa marka hore waa soo buuxsamaa ibtana way adkaanaysaa way taagmaysaa.
waxaa ugu kulul Ibta oo loo qanqaniino si khafiif ah oo
ay xaasku ku istiinto.
oo la dhunkadaa ma
laha istiin sidaasi u sii
ha yeeshee waxa uu sii kordhaa kolba marka dhudhunka iyo
gacanta xaggeeda sare loo sii dhaqaaqo, gaar ahaan dhanka gudaha.
Waxa loo baahan yahay ah in fanka cayaarsiinta aan loo adeegsan oo qura
bushimaha, sababta oo ah sida bushimaha oo kale amaba kasii daran bay labada
gacmoodna qayb lixaad uga qaataan fankaasi, iyaga oo weliba gaara goobo istiin
aanay bushimuhu gaari karin.
Taataabashadu waxay inta badan istiin ku abuurtaa qofka taataabtaha ah, waxayse ku
xiran tahay xaaladda nafsiyadeed ee labada ruux. Waxa laga yaabaa inay taataabashadu
mararka qaar keento natiijooyin aan loo aayin, sida la-taataabtaha oo xanaaqa
haddii uusan raalli ka ahayan waxa dhacaya.
Inkasta oo taataabashada ama salaaxistu ay jirka oo dhan raad ku wada reebto, haddana
jirku isku si’ uma wada dareemo, waxana uu istiinku sii kordhaa kolba marka loo sii
dhaadhaco dhinaca shafka ilaa laga gaaro labada naas. Waxaynu aragnaa in waqtiga
isdhexgalka, dhabarka iyo barida oo la salaaxaa ay iyana istiin ba’an keenaan.
Goobaha istiin qaadashadu guud ahaan, waxay ku badan yihiin agagaaraha
daloollada jirka, labada naasna waxa lagu tiriyaa inay kamid yihiin goobaha ugu
istiinka badan jirka, waxaana uu gaaraa
heerkiisa ugu sarreeya kolka la maraanmaro
ibaha naasaha. Waxa jira dhowr hab oo loo
maraanmaro ibaha naasaha loona kiciyo dareenkooda waxaana kamid ah
Hablaha somaliyeed EE Uk OO Kacabanaya Rag La’aan.
QAABKA CASRI GA AH EE LA ISUGU GALMODO 2016IYO SIRTA NOLASHA.